Iclọ Ọrụ Mgbasa Ozi Silicone Mkpokọta Mgbanye Wetting SILIA2008 Factory and Pricelist | Honneur
Mgbakwunye Silicone Mkpesa Wetting Onye nnọchi anya SILIA2008
SILIA-2008 Ọrụ Mgbasa Agriclọ Ọrụ Mgbasa Silicone na Wetting
Esemokwu elu （25 ℃ ， 0.1% ， mN / m） ： <20.5
SILIA-2008 Mgbasa Ọhịa Silicone na Wetting
bụ trisiloxane polyether gbanwere na ụdị silicone surfactant nke nwere ikike dị ukwuu nke ịgbasa na banye. Ọ na - eme ka mmiri ahụ erughị ala gbadata ruo 20.5mN / m na ntinye nke 0.1% (wt.). Mgbe agwakọtara ya na ọgwụ ọgwụ na - egbu mmiri na ọnụego ya ụfọdụ, ọ nwere ike belata mmụọ ozi kọntaktị n'etiti ntan ma ọ bụ akwụkwọ, nke nwere ike ime ka mkpuchi nke ịgba. SILIA-2008 nwere ike ime ka mmiri ọgwụ ahụ gwọọ
site na stomatal nke akwụkwọ, nke dị oke uru maka imeziwanye arụmọrụ, belata ego nke ọgwụ na-egbu egbu, ịchekwa ọnụ ahịa, belata mmetọ gburugburu ebe obibi nke pesticides.
Iji belata onodu ogwu nke na eme ka aru di ike
1. enwere ike iji ya mee ihe dị ka ọgwụ ịgba: SILIA-2008 nwere ike ịbawanye mkpuchi nke onye na-ahụ maka spraying, ma kwalite ịkwalite ma belata usoro nke onye na-ahụ maka spraying. SILIA-2008 bụ nke kachasị arụ ọrụ mgbe agwakọta agbụrụ
(ii) ịkwadebe ngwakọta ịgba maka ozugbo iji ma ọ bụ n'ime nkwadebe 24h.
2. enwere ike iji ya rụọ ọrụ na usoro ịkọ nri: enwere ike ịgbakwunye SILIA-2008 na ọgwụ nje na mbụ.
Applicationzọ Ngwa ：
1) Ejiri mmanu gwakọtara n’otu ilu
Na mkpokọta, tinye SILIA-2008 (oge 4000) 5g na ntanye 20kg ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwalite adsorption nke sistemu ọgwụ mgbochi, dịkwuo ọrụ nke ọgwụ na-akụ ọgwụ ma ọ bụ belata ego nke ịgba n'ihu, ọ kwesịrị ịgbakwunye ọnụego ojiji nke ọma. Na mkpokọta, ego dị ka ndị a:
Osisi na-akwalite onye na-achịkwa: 0.025% ～ 0.05%
Ogwu ogwu: 0.025% ～ 0.15%
Ogwu ogwu: 0.025% ～ 0.1%
Ogbu nje: 0.015% ～ 0.05%
Fatịlaịza na Chọpụta mmewere: 0.015 ～ 0.1%
Mgbe ị na-eji ya, bu ụzọ gbazee ọgwụ na-egbu mmiri, gbakwunye SILIA-2008 mgbe agwakọrịrị mmiri 80%, tinye mmiri na 100% ma jikọta ha otu. A na-adụ ọdụ na mgbe ị na-eji Mgbasa Ọhịa Silicone na Penetrating, ka mmiri belata 1/2 nke nkịtị (tụrụ aro) ma ọ bụ 2/3, iji ọgwụ eji egbu egbu belata ka 70-80% nke nkịtị. Iji obere oghere imi ahụ ga-eme ka ọpụpụ ngwa ngwa.
2) eji ọgwụ eji egbu egbu
Ọ bụrụ na ngwaahịa agbakwunyere na ọgwụ izizi izizi, anyị na-atụ aro ọnụego ahụ bụ 0,5% -8% nke ọgwụ mbu. Dozie uru PH nke ọgwụ mgbochi ọgwụ ka ọ bụrụ 6-8. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịgbanwe ego nke Mgbasa Silicone Spreading na Penetrating Agent dị ka ụdị ọgwụ mgbochi na ọgwụ dị iche iche iji ruo na nsonaazụ kachasị arụ ọrụ na nke akụ na ụba. Na -eme nnwale nnabata na nyocha nke nzọ ụkwụ tupu ojiji ..
Nke gara aga: Mgbakwunye Ihe Mgbasa Ọkụ Silicone nke SILIA-2001
Osote: Mgbakwunye Silicone na-agbasa Mkpọ Ọkụ SILIA2009